အနှစ် ၅၀ ကြာအစဉ်အလာကိုချိုးဖောက်ခဲ့သော InverPad သည် Aquark မှတီထွင်ခဲ့သောမူလနည်းပညာဖြစ်သည်။ Pad ဒီဇိုင်း၊ Stepless-DC-Inverter နှင့်ဆူညံမှုတိုက်ဖျက်ရေးနည်းပညာများပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်ရေကူးအတွေ့အကြုံကိုအဆင့်သစ်သို့တိုးတက်စေသည်။
46dB (က)Boost Mode
stepless DC Inverter ကဖိအားကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နှင့်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ထိန်းညှိပေးသည်။ ကြိမ်နှုန်းနှင့် RPM တို့ကိုစွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့်အလွန်တိတ်ဆိတ်မှုတို့ကိုတစ် ဦး ချင်းစီညှိနိုင်သည်။
မစ္စတာတိတ်ဆိတ်-Stepless DC ကအင်ဗာရေကူးကန်အပူ Pump
Mr.Titan-Top အားဖြင့်သုံးသော stepless DC အင်ဗာတာရေကန်အပူရေစုပ်
InverSmart-Stepless DC ကအင်ဗာရေကူးကန်အပူ Pump
InverMax ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အင်ဗာတာရေကူးကန်အပူစုပ်စက် 60 / 110kw
AquaMini-Pool အပူ pump
မစ္စတာ Eco-DC ကအင်ဗာကို ABS ရေကူးကန်အပူ Pump
မစ္စတာစမတ်-Stepless DC ကအင်ဗာရေကူးကန်အပူ Pump
မစ္စတာ Eco-DC ကအင်ဗာသံမဏိရေကူးကန်အပူ Pump
Mr. Silence မှ“ ငါတို့အပူစုပ်စက်ရောင်းအားကို ၃ ခုတိုးခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းပြခန်းတွင်ဖောက်သည်များမြင်သောအခါ၎င်းတို့သည်၎င်း၏ခမ်းနားထည်ဝါသောအလူမီနီယံအဖုံးများဖြင့်စွဲဆောင်ခြင်းခံရသည်။ ထိုအခါသူတို့ကသာ။ ကြီးမြတ်ထုတ်ကုန်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရန်ဖွင့်စကားကိုနားထောငျဖို့ရှိသည်။ ငါတို့က ...
“ Mr. Silence ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့်ဟန်ဂေရီယန် Kerex ကုန်သည်များနှင့်ဖောက်သည်များသည်၎င်း၏ထူးခြားသောဒီဇိုင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ဒါဟာတကယ့်ဖျော်ဖြေပွဲခန်းမထဲမှာအသံချဲ့စက်နဲ့တူတယ်! အဘယ်အရာသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးကုန်ပစ္စည်းကိုပြိုင်ဘက်များနှင့်မတူသည်မှာအလွန်တိတ်ဆိတ်သောလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
Aquark သည်ရေကူးကန်အင်ဗာတာအပူပန့်များအားသုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အထူးပြုသည့်ပညာရှင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပူပန့်များအတွက် InverPad နည်းပညာကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
Keyuan နှစ်ဦးလမ်း, Gaoli တို့ကလည်းဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်, Ronggui, Shunde ခရိုင်, Foshan, PRChina 528306